Somaliland.Org » Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Isniin, 25 Febr.
February 25th, 2008 Comments Off Taliyihii hawlgelinta Ciidanka Puntland oo geeriyooday
Ciidan iyo Wafti uu hogaaminayo Wasiirka Kaluumaysiga Somaliland oo gaadhay Badhan Ceerigaabo(Ogaal) Wasiirka Kalluumaysiga iyo Khayraadka Badda Somaliland mudane, Cali Maxamed Qoorseef oo ay weheliyaan qaar ka mid ah Saraakiisha iyo ciidamada Qaranka ayaa xalay saqdii dhexe si nabad gelyo ah ku Gaadhay Magaalada Badhan ee Bariga Gobolka Sanaag.
Sida uu ku soo waramay Weriyaha Ogaal ee Gobolka Sanaag Cabdilaahi Xuseen Darwiish galabnimadii Jimcaha ayuu Wasiirka Kaluumaysigu gaadhay magaalada Ceerigaabo, Islamarkaana waxa uu tilmaamay in u jeedada Socdaalkiisu la xidhiidho sidii uu u tegi lahaa deegaanada bariga Sanaag. “Hawlaha gobolka ayaan u socdaa waxanna u baxayaa xagga bariga saxaafaddana marka aan soo laabto ayaan u warrami doonaa”Sidaa ayuu yidhi Wasiirku.
Gelinkii danbe ee Shalay ayaa Wasiirka Kaluumaysigu uga baxay Magaalada Ceerigaabo dhinaca bariga Sanaag (Badhan). Ka dib markii uu muddo laba maalmood ah shirar gaar ah la yeeshay waayeellaka iyo waxgaradka beesha bariga Sanaag oo uu ka soo jeedo, kuwaasoo la sheegay in qaarkood soo jeediyeen in Wasiirku u baxo Deegaanada Bariga Sanaag iyadoo aanay wehelin wax ciidamo ahi.
Warku waxa uu intaa ku daray in Deegaanada Bariga fog ee Gobolka Sanaag ay ka jiraan maleeshiyaad taageera maamul-goboleedka Puntland, Hase ahaatee wararkii ugu danbeeyay ee xalay saacadihii danbe naga soo gaadhay Gabolkaasi waxa ay tilmaamayaan in Wasiirka oo ay weheliyaan qaar ka mid ah gaadiidka qalabaysan (tekniko) iyo madaxda ciidammada Qaranka ee fadhigoodu yahay magaalada Ceerigaabo ay gaadheen magaalada Badhan iyadoo aan wax dhibaato ahii ka dhicin ilaa hada inta la ogyahay. In kastoo si weyn looga walaacsanaa isku dhac ka dhasha socdaalkan.
Dhinaca kale, warar lagu kalsoon yahay ayaa waxay xaqiijinayaan in saraakiil iyo ciidammo ka tirsan Puntland ay iyaguna ku suganyihiin degaanno ka mid ah degmada Badhan ee bariga Sanaag kuwaas oo sida la sheegay isu diyaarinaya sidii ay isu hortaagi lahaayeen wafitaga Wasiirka Kaluumaysiga.
Wasiirka Warfaafinta maamul Goboleedka Puntland Cabdiraxman Maxamuud Bangax oo shalay wax laga weydiiyay dhaq-dhaqaaqyada Bariga Gobolka Sanaag ayaa waxa uu ku dooday inuu Jiro Ciidamo ka tirsan Maamulkooda iyo Ciidamo Somaliland ahi ay isku horfadhiyaan deegaanka ka tirsan Bariga Gobolka Sanaag, Islamarkaana in kasta oo aanu soo qaadin socdaalka Badhan ee Waftiga Wasiirka Kaluumaysiga ee Somaliland, hadana meesha kamuu saarin isku dhac ciidan oo uu sheegay inay suurtagal tahay.
Bishii afraad ee sanadkii hore ayay ahayd markii Wafti Wasiiro iyo Hay’adaha Samafalka isugu jiray ay gaadheen Deegaanka Degmada Dhahar waqtigaas oo ay soo weerareen maleeshiyaad taabacsan Puntland.
Geerida Taliyihii Hawlgeglinta Puntland Taliyihii Howlgalinta Ciidanka maamul Goboleedka Puntland Soomaaliya Xiif Cali Taar ayaa ku geeriyooday shalay gelinkii hore Shil baabuur oo ka dhacay Deegaan aan ka fogay tuulada Tukaraq ee gobalka Sool, waxaana sidoo kale shilkaasi dhaawac ka soo gaadhay qaar ka mid ah ciidamadiisa.
Xiif Cali Taar (Marxuumka) waxa uu Dawalada Mbeghati uu u hayay jagada Taliyaha ciidamada dawlada Faderaalka ee Guutada 4aad , wuxuuna sidoo kale mudooyinkii ugu danbeeyey ku jirey Dibu habeyn la sheegay inuu doonayay inuu ku sameeyo ciidamada Puntland oo kala daatay. Ka dib markii lagu bur-buriyay Dagaalo ay Ciidamada qaranka Somaliland kula galeen deegaanka magaalada Laascaanood, wakhtigaas oo uu, Marxuumka shalay Geeriyooday laftiisu hogaaminayay.
Somaliland: Maanta oo kale 48-sanadood ka hor
“Ma jirto Somalilanders-ku sabab ay u del-delaan masuuliyada Hantida kaliya ee Gacantooda ku soo hadhaysa” The Economist
London (The Economist/Ogaal)- Muddo 48 sannadood haatan laga joogo iyo maanta oo kale maxay Somaliland ka filaysay wacyigii markaa xiisaha iyo xamaasadda badan ay dadweynuhu u hayeen? Inta aynaan hoos ugu daadegin qormadeenan, waxa xusid mudan in warbaahinta caalamka ee kala duwani ay waqtiyadan dambe aad uga hadlaysay heerka caalamku ka taagan yahay aqoonsiga Somaliland. Isla markaana waxa si joogto ah arrinta qaddiyadda aqoonsiga Somaliland uga hadla khubarada u dhuun-daloola arrimaha siyaasadda Gobolkan Geeska Afrika, kuwaasoo badiba dhalasho ahaan ka soo jeeda dalalka Maraykanka iyo Ingiriiska.
Wargeyska The Economist ee ka soo baxa magaalada London ee dalka Ingiriiska, ayaa dib inoogu celinaya xusuustii aayo-ka-tashiga qarannimo ee Somaliland dhamaadkii bishii February 1960-kii, xilliggaas oo maqaal uu daabacay Wargeysku kaga hadlay arrimihii waqtigaa gobolkan yaalay iyo madaxbanaanidii Somaliland iyo Soomaaliya oo qarka soo saarnayd. “Dabayl bedelaadda dastuurrada ah ayaa ka qarxaysa Gobolka Geeska Afrika oo dhan. February 17, British Somaliland waxa ka dhacay doorashooyin guud, kuwaasoo ahaa kuwii labaad ee waligeed ka dhaca Somaliland Protectorate (Maxmiyadda Somaliland), xisbigii ku guulaystayna waxa si degdeg ah u bedelay guulihii xidhiidhka ahaa ee uu gaadhay. Xubnaha Somaliland ee la doortay, ayaa haatan gacanta ku dhigaya Gole Baarlamaan oo aan xataa jirinba saddex sannadood ka hor.” Sidaasi waxay ka mid ahayd maqaalkii uu daabacay Wargeysku Feb 1960. Wargeyska The Economist, oo xilligaa saadaalinayay mashaakilaadka ka hor iman kara labada waddan ee Somaliland iyo Soomaaliya, waxa uu intaa ku daray; “Labada waddan ee Somaliland iyo Soomaaliya-ba waxay wajahayaan xaaladdo khatar ah oo caydinimo la gelayso iyaga oo dalal madaxbanaan ah. Hase ahaatee, labadoodaba waxa u wanaagsan inay maskaxahooda geliyaan haddii ay ku degdegaan ku fogaanta Itoobiya. Sababta oo ah ma jiri doono dal reer galbeedka ka mid ah oo ka taageeraya cadaawado ay kula kacaan Itoobiyaanka.”
Wargeyska oo ka hadlayay werwer ay ra’yul caamka Ingiriis ka qabeen midawgii labada waddan, isla markaana u muuqda inuu canaan ku saarayo Ingiriiska diyaarin la’aan reer Somaliland ka muuqatay oo loo arkayay in aanay u bislayn hanashada madaxbanaanida, ayaa yidhi; “Xilliga xorriyadda labada waddan waxay ku salaysan tahay dhamaadka tobbankii sannadood ee Qaramada Midoobay Soomaaliya ugu qabatay inuu Talyaanigu xorriyadooda ku siiyo, oo bisha Juun ay Talyaaniga cago-jiidka ahi ka baxaan Soomaaliya, halka Ingiriiska jooga Somaliland uu ka dambayn karo. Haddaba, Somalilanders-ku waxay tixgelinayaan inay tagaan, isla markaana xaqiiqdii ma jirto sabab caqli-gal ah oo ay u deldelaan masuuliyaddahooda u taagan hantida keliya ee u hadhaysa. Somali National League (SNL) ayaa ku guulaystay 20 ka mid ah 33 kursi ee baarlamaanku ka kooban yahay; SUP, oo ah koox yar oo samaysantay wax yar ka hor doorashooyinkan ayaa ku biiray SNL, isla markaana helay 12 kursi. Tanina waxay kaga tagtay gacmo-madhnaan Xisbiga NUF, oo ku guulaystay badiba kuraasta isku-daygii doorashooyinka sannadkii hore, isla markaana ah xisbi uu Ingiriisku xubnihiisa si khatar ah ugu tabobaray dawladnimada, kuwaas oo ka helay baarlamanka hal kursi. Dhamaanba axsaabtu waxay isku raaceen in Somaliland iyo Soomaaliya ay is-raaci doonaan sida ugu dhakhsaha badan, oo aan habsan lahayn.”
Mr Lennox-Boyd, oo ahaa Xoghayihii Gumaysiga u joogay Somaliland, ayuu wargeysku soo xiganayaa oo sannad ka hor xilliggaas (1959) la waraystay xilli uu ballanqaadyo khiyaamo ahaa u jeedinayay Somalilanders-ka; “Xoghayaha Gumaysi ee Somaliland Mr Lennox-Boyd, ayaa hadh geliyay sannadkii la soo dhaafay markii uu ballanqaadayay taageerada Ingiriiska ee Somaliland haddii ay raadiyaan “wada-shaqayn dhaw” oo ay la yeeshaan Soomaaliya. Waxa suuragal ahayd in marka la gaadho xilliga xorriyadda ay labada dhinac ay aad u yaraan lahayd danaynta ay haatan aadka u doonayaan ee guud ahaanba midawga tooska ah.” Maqaalka Wargeyska The Economist ee xilliggaas oo lagu qaadaa-dhigayay sidii reer Somaliland, gaar ahaan dadkii magaalooyinka joogay aanay u fahansanayn aayahoodii lumayay, iyo sidii xataa reer koonfureedku ay uga cago-jiidayeen inay si degdeg ah u xaqiijiyaan midawggaas ilaa inyar oo indhaha kala-haysay mooyaane, ayaa haddana maqaalkan uu xilligaa faafiyay, waxa uu barbar dhigayaa xaaladda xilligan ee aqoonsi-raadinta Somaliland. Si la mid ah sida khubaro badani ay aaminsan yihiin Somaliland qadiyadda gooni-isu-taageedu waa mid ay badiba dalalka waawayni jecel yihiin in ciddi uun kaga horayso, si ay markaa iyaguna u daba-galaan, hase ahaatee, wargeyskan oo xilligaa shaaciyay in maamulkii Somaliland ka talinayay ee Ingiriisku ay lug ku lahaayeen midawgii Soomaaliya, ayaa haatana shaaciyay in horumarka Somaliland uu ku jiro sida uu Ingiriis ka yeelo!
Xildhibaan (Duur) Xisbigeed ka soo baxday?
Hargeysa (Ogaal/W.Wararka) – Xildhibaan Maxamed Nuur Caraale (Duur) oo ka mid ah Wafti ka socda Baarlamanka Somaliland oo todobaadyadii aynu soo dhaafnay-ba ku sugnaa Dalka Ingriiska, Islamarkaana ka tirsan mudanayaasha Galaha Wakiillada ee ka soo baxay xisbiga talada haya ee UDUB ayaa waraysi kooban oo uu siiyay shabakada wararka Inarnetka ee Qaran kaga hadlay arrimaha ugu muhiimsan ee socdaalkooda iyo waxyaabo kale.
Waraysigaasi waxa uu dhacay sidan:
Su’aal:- Xildhibaan marka hore bal socdaalkiina aad UK ku timaadeen faah-faahin kooban naga sii?
Jawaab-: Hadaan soo koobo, socdaalkayagu waxa uu ahaa mid rasmi ah oo aanu ku nimid dalkan Ingriiska, waxa aananu ka koobnayn xildhibaanada Somaliland oo dhan UDUB, Kulmiye iyo UCID, waxa aanu booqanay oo lanagu marti qaaday aqalka Barlmaanka dalka Britain, waxii aanu u soconay oo ahaa dan guud iyo in aanu taageerno socda